LIBREOFFICE MA Ọ BỤ OPENOFFICE: NKE KA MMA - ESI MEE - 2019
Ụlọ ọrụ agha. LibreOffice vs OpenOffice. Kedu nke ka mma?
N'oge a, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ n'efu na-arịwanye elu. Kwa ụbọchị ọnụọgụgụ nke ndị ọrụ ha na-abawanye ụba kwa ụbọchị n'ihi ọrụ nke ngwa ngwa na ịrụ ọrụ na-agbanwe agbanwe mgbe niile. Mana na mmemme ndị dị otú ahụ, ọnụ ọgụgụ ha na-eto eto ma na-ahọrọ otu ngwaahịa na-aghọ ezigbo nsogbu.
Ka anyị lelee ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ewu ewu kachasị ewu ewu, ya bụ Libreoffice ma Openoffice n'ihe gbasara àgwà ha.
Download ụdị ọhụrụ Office Free
Dịka LibreOffice ngwugwu, OpenOffice mejupụtara 6 mmemme: ederede nchịkọta akụkọ (Onye edemede), ihe nhazi data (Calc), nchịkọta akụkọ (Bipute), ngwaọrụ maka ịmepụta ihe ngosi (Mmetụta), nchịkọta akụkọ (Math) na usoro njikwa nchekwa data (Isi ). Ihe arụ ọrụ niile adịghị nnọọ iche, n'ihi eziokwu ahụ bụ na LibreOffice bụ ihe nkwụsị nke OpenOffice oru.
Ọ bụghị mpaghara kachasị mkpa, mana n'ọtụtụ ọnọdụ, ndị ọrụ na-ahọrọ ngwaahịa kpọmkwem maka imewe yana njiri. The LibreOffice interface bụ a bit ọzọ mara na nwere ihe oyiyi na n'elu panel karịa OpenOffice, nke na-enye gị ohere ime ihe ndị ọzọ na-eji akara ngosi na panel. Nke ahụ bụ, onye ọrụ adịghị mkpa ịchọ ọrụ na ntanetị dị iche iche.
Ọ bụrụ na ị nyochaa arụmọrụ nke ngwa na ngwaike ahụ, ọ pụtara na OpenOffice mepee akwụkwọ ngwa ngwa, na-azọpụta ha ngwa ngwa ma na-edegharị ha n'ụdị ọzọ. Ma na PC nke oge a, ihe dị iche ga-abụ ihe na-agaghị ahụ anya.
Ma LibreOffice na OpenOffice nwere interface ontuitive, usoro setịpụrụ arụmọrụ, na n'ozuzu ha dị nnọọ ka ojiji. Obere obere dị iche iche adịghị emetụta ọrụ ahụ, ya mere oke nhọrọ nke ụlọ ọrụ na-adabere nanị na mmasị onwe gị.